20:48 Ko Saw 8 comments
ပြိုင်ကားဂိမ်း ကစားလိုသူများ အတွက် Need For Speed5ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ပိုစ့်မတင်ဖြစ်တာ ကြာပါပြီး။ http://www.mediafire.com မှာ တင်ထားတဲ့ Softwares မှန်သမျှ ဖြုတ်ချခံ ခဏခဏ ထိနေလို မတင်ဖြစ်တော့တာပါ။ မိတ်ဆွေများ အားလုံး နာလည်းပေးကြပါ။ Need For Speed5ပြိုင်ကားဂိမ်း အလိုရှိသူများ အောက်က လင့်မှာ ဒေါင်းလောင် ဆွဲလိုက်ပါ။ ကျွန်တော် တင်ထားပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံခြားဆိုဒ်တစ်ခုက မ လာတာပါ။ ကျွန်တော် စမ်းကစားပြီးပါပြီး။ key က 3245-3245 ပါ။
ဒေါင်းလောင်လင့်က ဒီမှာပါ 194.39Mb ရှိပါတယ်။ Free Download Full Version!194.39Mb
System Requirements! Window/Xp/7/Vista/98
Cpu:800 MHZ Ram:128 Mb
Free Hard: 650 Mb
If he require key you can type Any Code Same As 3245-3245
09:48 Ko Saw3comments
ဒါကတော့ CorelDRAW X5 Protable ပါ။ ကျွန်တော်လည်း ဒီဇိုင်းဆွဲရင် CorelDRAW ကိုပဲ သုံးပါတယ်။ 200>MB ရှိပါတယ်။ သုံး ဖိုင်ခွဲပြီး တင်ထားပေးပါတယ်။ ဖိုင်ဖြေရင် ပထမဖိုင့်မှာ Right ကလစ်လုပ်ပြီး Ehtract here ကို ကလစ်လုပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆို ဖိုင်ဖြေပေးပြီးရင် သုံးလိုရပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း CorelDRAW X5 Protable ကို သုံးတဲ့ အချိန်ကျရင် အင်တာနက် သုံးသူများ အင်တာနက်လိုင်းကို ခဏပိတ်ထားပေးပါ။ CorelDRAW X5 Protable ကို သုံးလိုရတဲ့ အချိန်မှ အင်တာနက်လိုင်းကို သုံးချင်သုံးလိုရပါတယ်။ အလိုရှိသူများအောက်မှာ downloads ယူလိုက်ပါ။
CorelDRAW X5 Protable Part.1 downloads links က ဒီမှာပါ
CorelDRAW X5 Protable Part.2 downloads links က ဒီမှာပါ
CorelDRAW X5 Protable Part.3 downloads links က ဒီမှာပါ
20:47 Ko Saw3comments
Adobe Illustrator CS5 portable ကို အလိုရှိသူများ အတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အင်တာနက်လိုင်းကို သုံးနေတဲ့ သူများ Illustrator CS5 portable ကို သုံးဖို့ဖွင်ရင် အင်တာနက်လိုင်းကို ခဏပိတ်ထားပေးပါ။ သုံးလိုရတဲ့ အခါမှ အင်တာနက်လိုင်းကို ပြန်ဖွင့်ပြီး သုံးလိုရပါတယ်။ အင်တာနက်လိုင်းကို မသုံးတဲ့ သူများကတော့ ပြသာနာမရှိပါဘူး။ အလိုရှိသူများ အောက်က အဆင်ပြေတဲ့ လင့်မှာ downloads ယူလိုက်ပါ။ 200MB ရှိပါတယ်။ ၄ ဖိုင်ခွဲပြီး တင်ထားပေးပါတယ်။
AI downloads links part. 1 က ဒီမှာပါ
AI downloads links part.2က ဒီမှာပါ
AI downloads links part.3က ဒီမှာပါ
AI downloads links part.4က ဒီမှာပါ
16:04 Ko Saw No comments
၆ ရက် ၃ လ ၂၀၁၃ ရက်
downloads လင့်များကို ပြန်တင်ပေးထားပေး Softwares များ
(၁) adobe photoshop cs3 နဲ့4အလိုရှိသူများ အတွက်
(၂) Nero 8 အလိုရှိသူများအတွက်
(၃) 100 years myanmar calendar
(၄) pdf ဖိုင့်တွေကို ဖတ်ချင်သူများ အတွက် Adobe Reader
(၅) CybeLink Power Director 8.0 နဲ့ ဗီဒီယို တည်ဖြတ်လိုသူများ
(၆)Your Uninstaller! Pro 7.0.2010.8
(၇) SuperRam6နဲ့ ကိုယ်ရဲ့ Ram ကို ထိန်းသိမ်းရအောင်
စတဲ့ Softwares များ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ အလိုရှိသော Softwares များ လင့်ပျက်နေပါက cbox က ဖြစ်စေ၊ ကော်မန့်က တစ်ဆင့် ဖြစ်စေ အကြောင်းကြားပြီး တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ အချိန်အားတာနဲ့ ပြန်ပြီးတင်ပေးပါမယ်။
15:49 Ko Saw2comments
ProShow.Gold အလိုရှိသူများအတွက် တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ အရင်ကလည်း တင်ပေးဖူး ပါတယ်။ ခု အသစ် ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အထဲမှာ လိုင်စင်ကီး အားလုံးထည့်ထားပေးပါတယ်။ Install သွင်းတဲ့ အချိန် အင်တာနက်လိုင်းကို ခဏပိတ်ထားပေးပါ။ အပ်ဒိန် မလုပ်မိပါစေနဲ့။ Install သွင်းပြီးရင် စက်ကို Restart ချပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆို သုံးလိုရပါပြီး။ 28.MB ပဲရှိပါတယ်။အလိုရှိသူများ ဒီမှာ downloads ယူလိုက်ပါ။
21:23 Ko Saw4comments
ဗေဒင်ချစ်သူများ အတွက် လွယ်လွယ်ကူကူ တွက်ချက်လို၇တဲ့ မြန်မာဘာသာနဲက ဗေဒင် သုံးမျိုးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နံပါတ် ဗေဒင်၊(မွေးနေ့ထည့်ပြီးတွက်)ရယ်၊ ရာသီဖွား ဗေဒင်(၁၂ လရာသီဖွား)ရယ်၊ လက်ထောက်ဗေဒင်(မေးခွန် ၁၀၀)ရယ် သုံးမျိုးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူက Install သွင်းစရာမလိုပါဘူး၊၊ ဖိုင်ဖြေပြီးရင် copy ကူပြီး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ နေရာမှာ ထားပြီး ကလစ် နှစ်ချက်နှိပ်ပြီး သုံးရုံပါပဲ။ ဘယ်သူတွေ တီထွင်လိုက်သလဲ၊ ဘယ်လင့်ကလဲ ဆိုတာကတော့ မမှတ်မိတော့လို ပြန်ပြီးလင့်ပြန်မချိတ်နိုင်တာကို စိတ်မဆိုးပါနဲ့။ ရေးတဲ့ လူတွေကို လေးစားပါတယ်။
10MB ပဲရှိပါတယ်။ အလိုရှိသူများ ဒီလင့်မှာ downloads ယူလိုက်ပါ။
Need For Speed5ပြိုင်ကားဂိမ်း ကစားလိုသူများ အတွက...